Nyein Thu, Author at Lifestyle Myanmar
ကလေးရှိတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ သတိထားရမယ့်အချက် (၁၀) ချက်
ဒီလိုခေါင်းစဉ်မျိုးက ရေးလေ့ရေးထမရှိပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ လက်တွေ့မှာ ကွာရှင်းထားတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ ဒိတ်ကြမယ့် အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနဲ့ ကွာရှင်းထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ဒိတ်မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး သူရဲ့ ဇနီးဟောင်းနဲ့ အမှန်တကယ်ကွာရှင်းထားရဲ့လားဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအရာ သေချာပြီဆိုရင် နောက်ပြီး အဲ့ဒီ့အမျိုးသားက သင့်ကို...
လူတစ်ယောက်ဟာ သူတို့အမူအကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား? တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့်ရော ပြောင်းလဲလေ့ရှိသလား?
လူတွေက သူတို့ကြောင့်တစ်ခြားလူတွေ ပြောင်းလဲသွားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တာမျိုးနှစ်သက်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လူတွေက အမှန်တကယ်ရော ပြောင်းလဲကြရဲ့လား? သေချာတာတစ်ခုက အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ စွဲမြဲလာတဲ့အမူအကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ခက်ခဲလွန်းတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့အားလုံးမှာ ပင်ကိုယ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ၊ သီးခြားအပြုအမူစရိုက်များ၊ အလေ့အထတွေနှင့် သဘောထားတွေကလည်း...
သင့်ဆံပင်ရဲ့ အရည်အသွေးကို အဆင့်မြှင့်စေနိုင်မယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ချို့
အင်တာနက်မှာ တစ်ခါတလေ မျက်စိနောက်လောက်အောင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကွဲပြားတဲ့ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းနည်းတွေက ပြည့်နှက်နေပါလိမ့်မယ်။ အလှပြင်ဆိုင်တွေက လက်မအနည်းငယ်ဖြတ်ဖို့ပြောဆိုကြပြီး စတိုင်လ်လစ်တွေ အကြံပြုကြတဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ကြဖို့ ပြောကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့ ဆံပင်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိပြီး ကိုယ့်ရဲ့...
နေ့ရက်တိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော၊ တစ်ခြားလူတွေကိုပါ အနိုင်ရဖို့ သင်သုံးနိုင်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ကွက် (၅) ခု
လူအများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရခြင်းက လူတိုင်းအတွက် တစ်ခါတရံမှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်အသိုင်းအဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်တွေကို ကျင့်သုံးခြင်းက သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ ချောမွေ့တဲ့ဆက်ဆံရေကို ဖန်တီးပေးမှာပါ။ တစ်ခြားလူတွေနဲ့ ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်မှုဖန်တီးရာမှာ...
သင့်တို့နှစ်ယောက်အတွက် Perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာသော အချစ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်လက္ခဏာများ
သင့်အနေေနဲ့ ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးတစ်ခုလို့ပြောရင် ဘယ်အရာကို အရင်ဆုံးပြေးမြင်လဲ? ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကရော ဘာနဲ့ တိုင်းတာပြီး ပြောလေ့ရှိလဲ? ကျွန်မအနေနဲ့တော့ ပြီးပြည့်စုံစွာ လိုက်ဖက်ပြီး ကျန်းမာတဲ့စုံတွဲဆိုတာကို ဒီအချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး ပြောပါမယ်။ ၁။ အပြန်အလှန် လေးစားခြင်း အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သာမန်ဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစားခြင်းက...
ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ လုံးဝမချိန်းတွေ့သင့်၊ မလိုက်ဖက်သော ရာသီခွင်များ
တစ်ချို့သော ဆက်ဆံရေးတွေက အစကတည်းက ဖြစ်မလာသင့်တဲ့ လုံးဝမရည်ရွယ်သင့်သော ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရာသီခွင် နိမိတ်တွေက သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတာကြောင့် သင်ဘယ်တော့မှ မချိန်းတွေ့သင့်ဘူးဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ ရာသီခွင်တစ်ခုအမြဲရှိနေပါတယ်။ သင်နဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ရာသီခွင်က ဘယ်ရာသီခွင်များဖြစ်မလဲ?...
Introvert တွေက သူတို့ရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနှင့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆက်သွယ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာ introvert တွေရဲ့ ဘဝမှာ အရေးကြီးသော သတ္တဝါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က introvert တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒီအရာက ဘယ်လောက်အထိ မှန်ကန်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေက လူသားတွေနဲ့စကားပြောရတာထက် ပိုနာလည်မှုရှိတယ်လို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။...
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ စကားလုံးတွေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှု (၆) မျိုး
ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကျူးလွန်တာကြောင့် အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းက သင့်နှလုံးသားတွေကို အပိုင်းပိုင်းကွဲစေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မကျူးလွန်ပေမယ့် အလွဲသုံးစားမှု၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်းမြောက်သော ထိခိုက်စေမှုတွေက ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ၁။ အခိုးအငွေ့လို အနိုင်ကျင့်နည်း...
ပျင်းရိခြင်းက တစ်ခါတလေမှာတော့ ဘဝကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်သော အကြောင်းရင်းများ
ဒီနေ့ခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ သင့်ကို အချိန်ပိုလုပ်ဖို့ တွန်းအားတွေပေးနေပြီး သင်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဝယ်ယူဖို့ ငွေပိုတွေရှာနေရပါတယ်။ သင်အကျော်ကြားဆုံး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ အကြီးဆုံးအိမ်နှင့် တန်ဖိုးကြီး ကားတွေစတဲ့အရာတွေက အဆုံးမရှိ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေက စိတ်ပျက်စရာကစားပွဲကြီးပါပဲ။ ညဘက်အိပ်ယာဝင်ချိန်မှာတောင် မနက်ဖြန်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ၊ အခြေအနေမကောင်းတော့တဲ့ အနာဂတ်အကြောင်းတွေက နှောင့်ယှက်နေကြပါတယ်။...
တစ်စုံတစ်ဦးကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာလက္ခဏာ (၆) ချက်
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြောဖို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ လူတိုင်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေကို နှစ်သက်ကြပြီး စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်းတွေကို လိုလားကြတာကြောင့် လူတိုင်းက ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုကို မတူကွဲပြားစွာ ပြလေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသတဲ့နည်းလမ်းတွေက လွဲချော်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ဘဝမှာ...